Top iPhone Battery Dhibaatooyinka iyo sidii ay uga takhalusi iyaga ka mid ah
1. Play Games oo kaliya marka aad awoodi karin inay
Oo dhan Waxaan jeclahay inaan u ciyaaro kulan ku iPhone iyo sababta ma uu doonaynin waxaan ?! Waa markii ugu fiican ee la soo dhaafay in ay jirto. Laakiin ku haay maanka in kulan waa sababta ugu weyn ee batari dheecaan. Waxaan Kuma doodayno in aad uninstall ciyaaraha oo dhan ka iPhone iyo bilaabin isticmaalka kaliya in ay wacaan ama gura emails qaar ka mid ah. Laakiin mar walba maanka ku hayo xaaladdaada iyo ciyaaro kulan oo kaliya marka aad diyaar u tahay inay ku riday phone in kharash la'aan soo food saartay dhibaato kasta oo dib tahay.
2. In Background App Refresh
App Background u raaxayn lahaa waa muuqaal aad u caqli badan runtii, laakiin ma ogtahay in ay jecel in ay cunaan ilaa iyo batari? Waa hagaag, haatan waxaad camal falaysaan. App Background helid waa in ay wakhtiga ula socoto in aad waxay u isticmaalaan app gaar ah ka dibna waxa ay u raaxayn xaq wakhtigaas ka hor, sidaa darteed dheecaan batteriga. Waa inaad demisaa si aad u hesho in ka badan oo ka mid ah noloshaada batteriga.
3. leexo Automatic App Updates off
Updates Automatic ka dhigan tahay in mar kasta oo version a cusub ee app ah waxaa laga heli karaa, iPhone waxaa u cusbooneysiin doonaa. Muuqaalka anfacaya, laakiin waxa ay qaadataa ilaa awood ka batteriga. Deminta updates si toos ah waxay noqon kartaa baado ah batari dhabta ah.
4. noqda off Talooyin App
Jeedin App u muuqdaan ilaa eegi badan oo xogta meesha la xiriira oo ku salaysan in talinaynaa Chine in aad ka heli kartaa oo xiiso leh. Iyaduna in la yidhaahdo, habkaani sidoo kale gubtay awood badan ka batteriga. Waa inaad demisaa una dareento farqi muuqda qaab ciyaareed aad batariga ee.
5. In la yareeyo dhalaalka Screen
God goob dhalaalka screen si toos ah iyo si fudud loo yareeyo nuurka heer hooseeyo raaxo leh. Sidaas iPhone ma yeelan doonto in ay sii maareeyo heer nuurka kugu badbaadiyo badan oo nolosha batari in horumarka.
6. Wi-Fi Off
Haddii aadan u baahan tahay, ha u celin ku saabsan iyo in aad dareento doonaa farqiga u ah nolosha batari ku dhowaad goobtii.
7. Raadi dhinto ka Battery (macruufka 8/9)
Isticmaal "isticmaalka batari" feature in ay helaan Chine in lagu ugu samaynta isticmaalka awooda batariga. Markaas labada karaysaa ama u isticmaalaan si taxadir leh.
8. soo jeeda Disable Mishiinkan
Soo jeeda Mishiinkan shaki eegi qabow laakiin waxay u baahan yihiin wax badan oo nolosha batari in ay ka shaqeeyaan. Sidaa darteed, waxaa dhaanta inay kaliya iyaga gab oo ay isticmaalaan awood dheeraad ah in wax soo saar leh samaynaya.
9. noqda Bluetooth Off
Sida Wi-Fi, Bluetooth waa in lagu gagadin oo kaliya marka loo baahdo. Xaji on had iyo jeer ma aha oo kaliya Caraabaah oo aan micno lahayn, laakiin sidoo kale gubtay awood badan batariga.
10. noqda off LTE ama gacanta Data
LTE waa ka maskax in 3G, laakiin tani waxa keliya marka aad leedahay soo dhaweynta wanaagsan signal. Xaaladdan oo ah soo dhawaynta signal xun, LTE kor u cunaa sida badan awood batariga 3G sameeyaa haddii ay dhacdo la mid ah sidaas darteed waa kaliya ka fiican sii dayn weli iska soo jeestay haddii aad u baahan tahay.
11. Yaree Email aroori
Calan doorasho email aroori jirey sida in hubinayo cusub mail ka dib saacad kasta ama si halkii 5 ama 10 daqiiqo oo kasta. Tani waxay kaa badbaadin doonaa badan oo batari by yareeyo helaan network.
12. Isticmaalka Auto-xir tayo leh
The-Auto qufulka ogolaanaysaa telefoonka seexan ka dib markii qadar go'an ah. Inkasta oo hab la seexdo, iPhone qaadataa ilaa awood yar ka batteriga. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in aad u dhigay-qufulka auto ee 1-2 daqiiqo ka dib kicida.
13. noqda off Fitness Socodka (macruufka 8/9)
Haddii aadan band taam ah leedahay ka dibna waxaa jira wax aan ku hawl taam aad raad via iPhone. Waxay qaadataa ilaa awood badan ka batteriga Sidaas daraaddeed, waxaa gab haddii aan si dhab ah loo baahan yahay.
14. iska noqda Adeegyada Goobta
Deminta adeegyada goobta aad ku badbaadin karaan wax badan oo ka mid ah batariga. Isku day oo arka farqiga.
15. noqda Airdrop off tahay haddaadan Isticmaalka Waxaa
AirDrop isticmaalaa labada Wi-Fi oo Bluetooth, kuwaasoo mid walba uu sababaa batari dheecaan ku filan u gaar ah. Waxaa Disable oo u celi on kaliya marka aad u baahan tahay.
16. Ha toos ah geliyaan Photos in iCloud
Dami auto Uploads iyo bilowdo qabashadeeda gurmad ah gacanta si aad u computer ama iCloud. Uploads Automatic u baahantahay in network dheecaan ka batteriga.
17. naafada baahnayn gariirka
Gariirka u baahan yahay motor in uu noqdo mid firfircoon oo motor in nuugayo ilaa batteriga. Waxaa sidaas daraaddeed, talinayaa in aad isticmaasho heegan ah halkii gariirka ah.
18. heenheensan batteriga ka hor inta aadan gashan mas'uul
Tip Tani ma aha oo kaliya in aad u saamaxaaya in ay aad kordhiso awoodda batariga laakiin sidoo kale waa weyn haddii aad rabto in aad noloshaada kala bixin batteriga. Sug batteriga in la nuugo madhan hor deeruhu in qalab aad. Tani batteriga caafimaad muddo dheer hayn doonaa.
Waxyaabaha 19. sameeyo wax ka yar-Battery-Intensive
Iska ilaali in daawashada filimaanta ama isticmaalaya barnaamijyadooda kale madadaalo aad iPhone halka aad tahay goob halkaas oo aad u baahan tahay in nafo la batteriga.
20. Buy Battery la Life Extended
Qaar ka mid ah shirkadaha, soo saaraan baytariyada nolosha la dheereeyey taas oo macnaheedu yahay in ay ka badan bateriga iPhone celcelis ahaan ay maamulaan. Haddii dhagaxa aad hadda ayaa aad guuldareystay, iibsado iyo talooyin jimicsi 1 ilaa 19 si aad u hesho ugu soo baxay waxaa ka mid ah.
iPhone Digitizer: Ma u baahan tahay si ay u bedesho?
Sidee soo saaro fariimaha qoraalka ka iPhone
Keenista music ka iPhone in iPod, iPad iyo iPhone
> Resource > iPhone > Top iPhone Battery Dhibaatooyinka iyo sidii ay uga takhalusi iyaga ka mid ah